निर्मला पन्त ह’त्या प्रकरण : दो’षी नजिक प्रहरी, प’क्राउ गर्ने तयारी ! – Khabarhouse
निर्मला पन्त ह’त्या प्रकरण : दो’षी नजिक प्रहरी, प’क्राउ गर्ने तयारी !
Khabar house | २० माघ २०७६, सोमबार १६:३४ | Comments
काठमाडौं : चर्चित नि’र्म’ला ह’त्या प्रकरणमा विगतमा भएका अनुसन्धानमा ग’ल्ती भएको प्रहरीले स्वीकार गरेको छ । विगतमा भएका अनुसन्धानमा कमजोरी भएको नि’ष्कर्ष निकाल्दै स’च्याएर अघि बढ्ने बताएको हो । प्राविधिक रुपमा भएका कमजोरी स’च्याएर प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । २०७५ साउन ११ गते कञ्चनपुर भीमदत्तनगर–२ कि १३ वर्षीया नि’र्म’ला पन्तको ब’लात्कार पछि ह’त्या गरिएको थियो ।
उक्त घ’टनामा सं’लग्न अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन् । अ’भियुक्त को प’हिचान नहुँदा प्रहरी आ’लोचनाको केन्द्रमा छ । तर, प्रहरीले नि’र्म’ला ह’त्यामा दी’लिप विष्टकै सं’लग्नता रहेको निस्कर्ष निकालेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । दीलिपलाई गत भदौ ४ गते तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरीले मुख्य अ’भियुक्त भन्दै सार्वजनिक गरेको थियो । तर नि’र्म’लाको स्वा’वसँग डीए’नए नमिलेपछि दीलिपलाई रि’हा गरिएको थियो ।
निर्दोषलाई प’क्राउ गरिएको भन्दै कञ्चनपुरमा आ’न्दोलन सुरु भएको थियो । आ’न्दोलनले उ’ग्ररुप लिँदा प्रहरीको गो’ली लागेर स्था’नीय श’नि खु’नाको ज्या’न गएको थियो । सरकारले घ’टनाको अनुसन्धान गर्न सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा छानबिन समिति ग’ठन गरेको थियो । मैनाली ने’तृत्वको समितिले अनुसन्धानमा प्रहरीले ला’परबाही गरेको, दी’लिपलाई न’क्कली अ’भियुक्त ख’डा गरेको नि’ष्कर्ष नि’कालेको थियो ।
तर प्रहरी फेरि दी’लि’प नै मुख्य अ’भियुक्त भएको निष्कर्षमा पुगेको छ ।दी’लि’पले अचेल निर्मलाको ब’ला त्कार पछि आफैले ह’त्या गरेको स्वीकार गर्दै आएका छन् । सार्वजनिक भएका विभिन्न भिडियोमा उनले ह’त्या गरेको स्वीकार गरेपछि प्रहरीले उनलाई नै अ’भियुक्त मानेको हो । यसबाहेक अन्य प्र’माण र विगतमा अनुसन्धानको प्रक्रियामा भएका क’मजोरी स’च्चाएर अघि ब’ढ्ने निष्कर्षमा रहेको एक प्रहरी अधिकारीले बताए ।
दी’लिपलाई प्रहरीले क्राउ गर्ने तयारी गरेको छ। निर्मलाकी आमा दु’र्गादेवीले समेत दीलिप वि’रुद्ध कि’टानी जा’हेरी दिएकी छन् । तर सरकार कै स’मितिले दीलिपलाई न’क्कली अ’भियुक्त बनाइएको भन्दै प्रतिवेदन दिएको र त्यस माथि तत्कालीन समयमा अनु सन्धानमा रहेका प्रहरी अधिकृत ब’र्खास्त र नि’लम्बनमा रहेकाले के गर्ने भन्नेबारे प्रहरी अन्योलमा पनि छ । प्रहरीले त्यसबारे कानुनी रायसमेत लिएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यू’रो (सी’आईबी), अ’पराध महा शाखा, जिल्ला प्रहरीको टोली अनुसन्धान का स’क्रिय छ ।
अनुसन्धानकै लागि प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको सचिवालयबाट डीएसपी गौतम केसीसहित प्रहरी अधिकृत कञ्चनपुर पुगेका छन् । राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्र’योगशालाका पूर्वप्रमुख समेत रहेका डी’ए’न’ए वि’शेषज्ञ जीवनप्रसाद रिजाल ने’तृत्वमा गठित छानबिन समितिले डी’एन’एको न’मूना प’रीक्षणमै त्रु’टि भएको निष्कर्ष नि’कालेपछि प्रहरी दी’लिप नै अभियुक्त भएको निष्कर्षमा पुगेको हो ।